Kudzima mutemo (masevhisi) | Papernerds
Kudzima mutemo (masevhisi)
Mhedzisiro yekukanzura: Panyaya yekukanzurwa kunoshanda, masevhisi akagamuchirwa anofanirwa kudzoserwa uye chero mabhenefiti (semuenzaniso kufarira) akaendeswa. Kana iwe usingakwanise kana zvishoma kutadza kudzosera kana kupa iyo yakagamuchirwa sevhisi uye mabhenefiti (semuenzaniso zvakanakira kushandiswa) kana chete mune yakashata mamiriro, iwe unofanirwa kutiripa isu kukosha kwacho. Izvi zvinogona kureva kuti iwe unofanirwa kusangana nezvibvumirano zvekubhadhara zvechibvumirano kwenguva kusvika kudzoserwa. Iwe unongofanirwa kubhadhara muripo wekushatiswa kwechinhu uye chero kushandiswa kunoitwa kana iko kushandiswa kana iko kuora kuchizoteerwa kumashure mukubata kwechinhu icho chinopfuura kupfuura kutarisa zvivakwa nekushanda. "Kuongorora zvivakwa uye mashandiro" zvinoreva kuyedza uye kuyedza zvinhu zvakasiyana, sezvazvinogona uye netsika muchitoro. Zvinhu zvinotakurika zvinodzoserwa panjodzi yedu. Iwe unofanirwa kutakura mitengo yenguva dzose yekudzorera zvinhu kana zvinhu zvaunzwa zvinoenderana nezvinhu zvakarairwa uye kana mutengo wezvinhu kudzoserwa usingapfuure huwandu hwemakumi mana emaeuro kana kana usati wagamuchira kutariswa kana vakaita kuti chibvumirano chakabvumiranwa chikamu kubhadhara. Zvikasadaro, kudzoka kwacho kwakasununguka kwauri. Zvinhu zvisingakwanise kutumirwa semapasuru zvinotorwa kubva kwauri. Zvisungo zvekubhadhara kubhadhara zvinofanirwa kuzadzikiswa mukati memazuva makumi matatu. Iyo nguva inotangira iwe kana iwe uchitumira chako chirevo chekukanzura kana izvo zvinhu, kwatiri isu neresiti yavo.
Mirayiridzo yakakosha: Kodzero yako yekubvisa inopera nguva isati yakwana kana kondirakiti yakazadziswa zvizere nemapato ese pane chako chikumbiro chaicho usati washandisa kodzero yako yekubvisa.
Kuguma kwebumbiro rekudzima
Ndokumbirawo utarise: Kodzero yekudzoserwa haishande kumakambani zvibvumirano zvekutengesa zvekutakurwa kwezvinhu zvinoitwa kune ako maratidziro kana zvakanyatsoenderana nezvinodiwa zvako pachako kana izvo zvisina kukodzera kudzoserwa nekuda kwehunhu hwavo kana izvo zvinogona kukuvadza nekukurumidza kana zuva rekupera kwaro rapfuura. Zvakare, hapana zvibvumirano zvekumusoro zvekutepfenyura odhiyo kana mavhidhiyo zvakarekodhwa, zvinyorwa kana software, chero iwe uchinge wasvinura vanounzwa madhata, kuendesa mapepanhau, magazini nemagazini, kunze kwekunge waita kontrakiti yako kuzivisa nerunhare. Kupfuurirazve, kodzero yekubvisirwa haipo mune zvibvumirano zvekutengesa zviri kure izvo zvinopedzwa nenzira yematengesi (156 BGB) kana kupihwa kwemasevhisi-anoenderana nemasevhisi ayo anopihwa nharembozha kana fakisi pachikumbiro chemutengi, kunze kwekunge mabasa emari achibatanidzwa.
Kodzero yekubviswa haishande kune zvigadzirwa zvemadhijitari zvinowanikwa uye zvinounzwa nenzira yekurodha pasi, 312 d ndima. 4 hapana. 1 BGB.
Chikumbiro chekudzoka kwezvinhu zvisingakwanise kutumirwa sepasuru zvinofanirwa kuitwa kwatiri nekunyora, zvichiratidza zvinhu zvakarairwa, nhamba yeinvoice nekero yako. Mutoro weuchapupu hwechikumbiro chekudzoka unemi newe semutengi.
Ndokumbirawo murangarire kuisa iyo invoice nhamba, kero yako izere uye yako yebhangi ruzivo kuti ubhadhare mari yako yekudzoka.